Fiantsenana fialantsasatra an-tserasera | Martech Zone
Ny fiantsenana an-tserasera dia mitombo isan-taona… ary mbola tsy misy miadana. BlueKai dia namoaka ity sary manaraka ity ho fiomanana amin'ny vanim-potoana fiantsenana fialantsasatra an-tserasera.
Avy amin'ny sary: ​​ny varotra an-tserasera dia nandray anjara lehibe tamin'ny vanim-potoana fiantsenana fialantsasatra saika isan-taona hatramin'ny nanombohany. Saingy rehefa lasa matotra kokoa ny marketing amin'ny Internet [ary manjary mahay ny tranonkala ny mpanjifa], dia miova tanteraka ny fivarotana fialantsasatra. Ireto ambany ireto ny fironana lehibe tamin'ny vanim-potoana fiantsenana 2010 izay manome fanazavana ny amin'ny fiovan'ny varotra fialantsasatra an-tserasera.
Tags: 20102010 fialantsasatrabluekaifivarotana fialantsasatrafiantsenana fialantsasatra an-tserasera
Ampio ny fikirana sosialy amin'ny lohahevitry ny WordPress anao